चीनले संसारभरि कोरोनाभाइरस फैलाएकोमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ : ट्रम्प:: Naya Nepal
सारभरि कोरोनाभाइरस फैलाएकोमा चीनले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चेतावनी दिएका छन् ।
सैन्य अस्पतालबाट ह्वाइट हाउस फर्केको ५० घन्टाभन्दा कम समयमा ट्रम्पले ट्विटरमा भिडियो पोस्ट गर्दै कोभिड–१९ महामारी संसारभरि फैलाउनका लागि चीन दोषी रहेको बताए ।
चीनको वुहान शहरमा ज्यानमारा कोरोनाभाइरस पहिलोपटक देखिएको हो । अमेरिकामा यसले २ लाख ११ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ ।
‘यो हुनुमा तपाईंको दोष छैन । यसमा चीन दोषी छ । र यस देशलाई यस्तो हालतमा ल्याएकोमा चीनले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । संसारलाई यस्तो गरेकोमा चीनले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । यो चीनको दोष हो । सम्झनुस् यो कुरा,’ ट्रम्पले भिडियो सन्देशमा बताए ।
चीनलाई दण्डित गर्न कुन उपाय अपनाउने भनी ट्रम्पले खुलाएनन् तर उनको प्रशासनले चीनविरुद्ध विभिन्न कारवाही चलाएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकारीहरूलाई प्रवेशाज्ञा दिन कडाइ पनि यसमा संलग्न छ । ट्रम्प र परराष्ट्रमन्त्री माइक पोम्पेओले संसारभरि चीनविरुद्ध अभियान चलाउँदै आफ्ना समकक्षीहरूलाई भेटिरहेका छन् ।
बुधवार अमेरिकी संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय मामिला समितिले कोभिड–१९ को उत्पत्तिका विषयमा अन्तिम प्रतिवेदन पेश गरेको छ । ‘यसको निष्कर्ष आश्चर्यजनक छैन, चीनले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई सक्रिय रूपमा ढाँट्यो र भाइरसको ढाकछोप गर्न बहुतै प्रयास गर्‍यो,’ सांसद ब्रायन मास्टले बताए ।
‘चीनले कोरोना महामारीका विषयमा पारदर्शिता नअपनाएको र कुव्यवस्थापन गरेकोले लाखौं मानिसको ज्यान गएको छ, करोडौं रोजगारी गुमेका छन् र अथाह आर्थिक क्षति पुगेको छ । चीनले यस्तो व्यवहार देखाएको यो पहिलोपटक हैन । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले कुरा घुमाउने गरेको इतिहास छ र उनीहरूलाई अपराधका लागि जवाफदेही बनाउने समय भइसकेको छ । यस्तो कुरा फेरि कहिल्यै नहोस् भनी हामीले मिलेर सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।
तत्काल रोजगारीमा जान नपर्नेले अबको दुई हप्ता पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन नदिन अनुरोध
काठमाण्डौ – तत्काल वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्नेले अबको दुई हप्तासम्म श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन नदिन सरकारले अनुरोध गरेको छ ।
ललितपुर – दशैंमा पाटन दरबार क्षेत्र केन्द्रीत भएर गरिने विभिन्न जात्रा तथा नाचहरुलाई यस वर्ष पूजाविधिमा मात्र सीमित गरिने भएको छ । कोरोनाको कारण दरबार क्षेत्र केन्द्रीत भएर गरिने विभिन्न जात्रा तथा नाचहरुलाई यस वर्ष पूजामा मात्र सीमित गरिने निर्णय भएको महा-नगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले जानकारी दिनु भयो।
दशैंका बेला मनाइने श्री मानमानेश्वरी भगवतीको खड्ग जात्रा (पायाः), अष्टमातृका नाच (गं प्याखं), ठेचोको नवदुर्गा नाच (गथु प्याखं) लगायतका नाच तथा जात्रा परम्परादेखि संचालन भइरहेका पूजाविधिमा मात्र सीमित गरिने निर्णय भएको उहाँले बताउनु भयो।
ललितपुर महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा गुथि संस्थान कार्यालय ललितपुर, जात्रा पर्वसँग सम्बन्धित सरोकारवाला संस्था र स्थानीय गुठियारसमेत सहभागी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको उहाँले बताउनु भयो।
सरकारको एक निर्णय, जसले घरघरमा कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम बढायो
काठमाडौं । सरकारले बारम्बार कोरोनाभाइरस संक्रमणको जोखिम कम नभएको बताउँदै आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम नभइसकेको भन्दै सचेत गराउँदै आएका छन् ।
अनावश्यक भीडभाड नगर्ने, कोरोनालाई हेलचेक्रयाइँ नगर्न, अत्यावश्यकबाहेक घर बाहिर ननिस्कन र निस्कनै परे नाकमुख छोपिने गरी मास्क लगाउन प्रवक्ता डा. गौतमले दैनिक भन्दै आएका छन् । अस्पतालमा शैय्या पनि कमि हुन थालेको उनले जानकारी दिँदै आएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिक रुपमा सचेत गराइरहँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भीडभाड हुने कार्यलाई खुला गर्दै गएको छ । सरकारको विरोधाभास निर्णय र आग्रहले जनता अलमलमा परेका बेला बुधबार सरकारले विद्यालय, कलेजका सबै तहको परीक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको जानकारी गराइएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले रोकिएका सबै परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेजस्तै कोरोना संक्रमणको जोखिम कम नभएको र भीडभाडले बढ्ने हो भने परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णयले अब घरघरमा पुग्ने देखिएको छ । स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर परीक्षा सञ्चालन गर्न दिइने भनिएको छ ।
अहिले सुचारु भएका सरकारी कार्यालयहरुमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेको देखिँदैन । यही अवस्थामा वैकल्पिक उपायबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेको सरकारले परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्वद्ध निकायलाई अनुमति दिएको हो ।
सरकारले कोरोना रोकथाममा केही ठोस कार्य गर्न सकेको छैन । बरु शैक्षिक संघसंस्थाका रोकिएका सबै परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएर कोरोना घरघरमा पुग्ने वातावरण मिलाइदिँदैछ ।
घरघरमै रहेका परीक्षार्थीहरुलाई परीक्षा केन्द्रमा बोलाएर परीक्षा गराउने सरकारको तयारीले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई बढाउने भन्दै चिन्ता जनाउन थालिएको छ ।